Ahoana no fomba ahazoako ny backlinks PR GOV avo?
Ny fandraisana ny pagerank avo goavoka amin'ny GOV dia afaka mampitombo ny fihevitry ny tranonkalanao. Mariho anefa fa ny fandraisana azy ireo dia asa sarotra sy maharitra. Ary, mazava ho azy, misy olona sasany mbola miady hevitra fa ny Google dia tsy mandeha amin'ireto dots EDU ireto na ny dot GOV mivadika amin'ny fomba hafa. Na izany aza, miombom-pihetseham-po ny liona na ny fiheverana marina momba ny SEO. Nahoana? Eny ary, andeha hojerentsika fa tsy mahafantatra azy ireo tsara kokoa noho ny amin'ireo sehatra malaza malaza i Google (e. h. , dot COM, dot NET, na dot ORG). Na izany na tsy izany, ny antokon'ny mpitondra ambony ao amin'ny fiverenan'ny GOV dia tokony hanome azy ireo lanja sy hery bebe kokoa, indrindra indrindra amin'ny fomba fijerin'ny Search Engine Optimization.
Noho izany, raha tsy manaiky fa tsy misy famaritana ofisialy nomen'ny Google intsony, ny lanjany lehibe amin'ny teboka GOV dia tsy tokony hohadinoina mihitsy. Raha ny marina dia fantatry ny maro amin'ireo SEO ireo ho toy ny fasana masina amin'ny fananganana rohy matanjaka, satria matetika izy ireo no avy amin'ny tranonkala azo itokisana sy miorina tsara indrindra.
Ka, ahoana ny momba ny tena SEO ny teboka GOV Backlinks? Eny, tsy misy hery lehibe amin'izy ireo. Saingy mety amin'ny sasantsasany ihany anefa io soso-kevitra hafahafa io. Ary mazava ho azy, misy vohikala na bilaogy afaka mahazo alalana tsy ahitàna ireo backlinks amin'ny mombamomba azy ireo, ary mbola mitazona tsara ao amin'ny Google. Midika izany fa raha manam-bintana ianao mba hahazoana doka goavana fanampiny amin'ny GOV, ny tranonkalanao na ny bilaogy dia hanana tombony mendrika raha mijanona amin'ny fifaninanana, noho ny fahefana matanjaka anao. Noho izany, raha jerena ny lanjany ho an'ny SEO eto dia lasa olana goavana - sarotra be ny mifandray amin'ireo sehatra an-tserasera sy loharanom-baovao an-tserasera avy amin'ny governemanta na ireo fototra ofisialy. Ny zavatra dia tsy hampifamatotra velively amin'ireo olona na iza na iza raha tsy misy antony, na tsy misy antony marim-pototra.
Araka ny efa nolazaiko, ny fandraisana ny rohy mankany amin'ny governemanta dia asa goavana sy maharitra. Saingy mbola zavatra mendrika izany, satria mahasoa foana izany - tsara kokoa noho ny any aoriana any, na dia avy amin'ireo tranonkala Pagerank tsara indrindra na domains ambony indrindra aza. Noho izany, alohan'ny hanombohana dia ataovy izay hahazoanao ny zava-drehetra. Midika fa ny votoatin'ny tranonkala misy anao na ny blaogy dia tokony ho fampahalalana tsotra fotsiny, mifandraika amin'ny lohahevitra fototra ary manome lanja lehibe ho an'ny tena olona. Ankoatra izany, ny pejy web anao dia tokony hatao tsara momba ny SEO eo an-toerana mba ho tsara tarehy ho an'ireo antoko politika sy ny toerana ofisialy.
Voalohany indrindra, ataovy izay hahazoana antoka fa ny rakitra an-tserasera ankehitriny ao amin'ny tranonkalanao dia efa mitondra ireo avo lenta ambony PR, PA, ary DA. Amin'izany fomba izany, dia ho tsara kokoa ny hahazo ireo sarobidy ireo. Ataovy izany, aza adino fa ny fitondrana indostrialy dia tsara foana ho anao - na dia tsy misy ny asanay aza - hampiasa ny fahefam-pahefana matanjaka sy ny fahaiza-manao matihanina ilaina amin'ny fanintonana ny lozisialy ny GOV, azo avy amin'ny loharanom-baovao azo itokisana sy azo itokisana ao amin'ny tranonkala.
Mitady ny toerana mety
Raha vantany vao nanome toky fa ny zavatra rehetra amin'ny tranokalanao na ny blôginao dia efa eo an-toerana, fotoana izao hahitana ireo tranonkala governemanta marina mba hampifandraisana amin'ny. Ny zavatra dia betsaka lavitra noho izany ny fanitarana ny faritra, fa tsy ny isa marina amin'ny fototra mifandraika sy ny fikambanana ofisialy. Midika izany fa tsy ny loharanom-baovao an-tserasera rehetra miaraka amin'ny sehatry ny sehatra GOV no nahatonga ny governemanta tena misy. Noho izany, amin'ny fitadiavana ny toerana mety, mila manana fanaraha-maso indroa ianao amin'ny maha-ara-drariny azy ireo. Ahoana no ahitantsika ireo masoivoho tena izy sy ireo loharano hafa misongadina? Manoro hevitra aho amin'ny fikarohana amin'ny "tranonkala:. gov "modifier vaovao mba hahafahanao mametraka fifantohana kokoa.
Ny fanehoan-kevitra momba ireo blôgy avo lenta / vohikala
Eny, mamela fanehoan-kevitra amin'ny bilaogin'ny governemanta sy vohikala ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahazoana ireo teboka goavana goavana nataon'i GOV. Mazava ho azy, fa tsy sahala amin'ny fanehoan-kevitra any an-toeran-kafa ny hahazoana rindran-damba ho setrin'izany, dia mety ho asa sarotra kokoa izany. Fa mbola izany no fomba fampiasa indrindra ampiasaina mba hamitana ilay tanjona, koa dia manoro hevitra aho ny manandrana izany alohan'ny zavatra hafa.
Noho izany, ny zavatra dia tsy manana toerana hanaovana fanamarihana mivantana ny lionan'ny tranonkala governemanta na bilaogy. Tokony hanana safidy an-tsika ve izy ireo, ny safidy fanehoan-kevitra dia mety ho tonga amin'ny NoFollow. Midika izany fa tsy maintsy mandoa fotoana sy ezaka ianao mba hahazoana ny tranonkala marina na pejy bilaogy izay tsy NoFollow. Na dia eo aza ny fahafahanao mahazo ny dingana avo lenta amin'ny PR dot GOV dia mety ho marefo, mamela fanamarihana iray mendrika ny fitifirana. Ataovy izay hahazoana antoka fa ny hevitrao dia manan-danja sy sarobidy ary tsy misy mitsambikina.
Mba hahazoana tombontsoa kokoa hahita ireo toerana izay mamela ny fanehoan-kevitr'i DoFollow, manoro hevitra aho ny hampiasa ny tranonkala:. gov inurl: blog. "Ankoatra ny fanandramana hamerenana ny teboka ankolaka GOV amin'ny fanehoan-kevitra, dia azonao atao ihany koa ny mampiasa karazana hafa. Na izany aza, tsy mila manana votoaty tena lehibe sy mandresy lahatra ianao. Noho izany, andao hijery fijery fohy etsy ambany.
Andramo ny hanoratana ny iray amin'ireto manaraka ireto:
Ny masoivohom-pitondram-panjakana - manoratra lahatsoratra momba ny hatsaràna, mandanjalanja izany ary avy eo dia mampahafantatra ny masoivoho. Mba ilazao izany, andeha hojerentsika hoe mihazakazaka orinasa iray ianao momba ny angovo azo havaozina, na ohatra ianao, fa mpanofana trano mahomby. Amin'izany fomba izany, ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mamorona fifanakalozan-kevitra momba ny bilaogy mifandraika na lahatsoratra iray manontolo natokana ho an'ny Biraon'ny angovo azo havaozina sy ny angovo. Pro tip: mikendry ny mpihaino manerantany dia fomba iray hifandraisana amin'ireo masoivohom-panjakana vahiny.
Politisiana - toy ny fomba teo aloha nanoratana lahatsoratra momba ny masoivohon'ny governemanta, afaka maivana ianao na hanoratra momba ny politisiana malaza iray na olona manana raharaha ara-dalàna mifandraika amin'ny raharaham-barotra. Aza sakanana ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny fanoratana momba ny hoavin'ny lalàna soso-kevitra vao haingana, ohatra, izay manan-danja amin'ny foto-drafitr'asa ara-barotra na sehatra ambony mifandraika amin'ny serivisy ara-barotra. Ampiasao fotsiny ny lahatsoratra mandresy lahatra ary ampifandraiso amin'ny hoe manolotra mpanao politika na tompon'andraikitra amin'izany. Avy eo, ampahafantaro ny manampahefana liana momba ny famoahana vaovao anao.
Fanadihadiana misahana ny fahafahana misafidy - misafidiana lohahevitra manan-danja ary manadinadino mpikambana miorina ao amin'ny maso ivoho iray. Amin'ny ankapobeny, dia ho nanaiky ny hanao ny tafatafa ianao, mazava ho azy fa nomena ny resaka adihevitra. Amin'izany fomba izany, afaka mamoaka famoahana ao amin'ny tranokalanao na blôgy ianao amin'ny rohy, izay manondro an'io maso ivoho io. Mariho fa amin'ny toe-javatra sasany dia mety hizara ny tafatafa amin'ny tenany manokana ny olona iray nanaovana fanadihadiana na ny masoivohon'ny governemanta. Raha toa ka mitranga izany, dia ho tianao kokoa ny hankafizinao ny teboka fanampiny an'ny GOV, ankoatra ny voalohany.
Mamolavola fifandraisana vaovao - manandrana hiditra fifandraisana fanampiny na fananganana fiaraha-miombonam-pirenena vaovao dia mety ho lasa fomba tsara koa hahazoana doka goavambe amin'ny GOV miaraka amin'ny Pagerank avo indrindra. Mazava ho azy fa tsy mahomby hatrany izany - satria ny zavatra rehetra eto dia miankina tanteraka amin'ny tranokalan'ny tranonkalanao na ny bilaoginao. Na izany aza, indraindray dia mety ho lasa tombotsoa mety ho an'ny fifandraisana amin'ny governemanta fanampiny. Na inona na inona toe-javatra iainana, ny famolavolana ny famoahana gazety miaraka amina rindran-damina mankany amin'ny masoivoho dia mbola mendrika voatifitra. Amin'izany, tadidio fa tena mahasoa ny fananganana fiaraha-miasa amin'ny masoivohom-panjakana. Raha ny tsara indrindra, izany dia mety hitarika mankany amin'ny pejy ofisialin'izy ireo matetika hampifandraisana amin'ny tranokalan'ny orinasa lehibe na bilaogy fanohanana.
Mandray anjara amin'ny Fanaraha-maso - mety hiasa amin'ny famoronana pejy loharanon-kevitra miaraka amin'ny fahafahana misimisy kokoa, na miezaka mametraka lisitra ao amin'ny pejy loharanom-pejy ho an'ny orinasa eo an-toerana. Azonao atao ny mametraka ny tenanao, ohatra hoe manao fanomezana asa soa ho an'ny lisitra miaraka amin'ny loharano voatokana miaraka amin'ny rohy sarobidy manondro ny tranonkalanao na blôgy anao.
Mofomamy - mamboly tranonkalan'ny governemanta dia saika mazàka foana ireny rakitra madinika ireny. Mianara bebe kokoa momba ireo teboka faran'izay mampalahelo ao amin'ny masoivohon'ny governemanta ary manao lahatsoratra fotsiny mba hilaza izay tiany henoina. Mazava ho azy fa tsy azo antoka ny fomba ahafahana mamerina ny teboka fanampiny an'ny GOV, saingy raha mahatsapa ny làlana marina ianao - ity tetikasa ity dia miasa tsara.
Mila adika ianao fa ny doka vaovao nomenao ny GOV dia tsy mampidi-doza. Midika izany fa mampiahiahy ho an'i Google raha toa ka manatsara kokoa ny rohin'ny governemanta ao amin'ny tranokalan-tserasera na ny blôginao. Noho izany, manoro hevitra aho fa manana fanamarinana indroa isaky ny rindranasa vaovao voaray amin'ny fampiasana fitaovana maimaim-poana amin'ny aterineto amin'ny fananganana rohy sy fikarohana. Ankoatr'ireo hafa, hitako ny Open Site Explorer, ny Semalt Analyzer, ary ny Screaming Frog satria mahasoa kokoa ho an'ny fanadihadiana iray manontolo momba ny profil-n'ny blôginao Source . Tohizo hatrany ny asa, ary vintana tsara!